कथाः साइबर प्रेम (भाग–३) - SangaloKhabar
मैले मेरो वास्तविकता बताउन नपाई ऊ म बाट टाढा भयो । मैले भेटेर नै सबै कुरा भन्छु भन्ने सोचाई राख्नु नै मेरो गल्ति भयो । मैले सबै कुरामा च्याटमा भनेको भए पनि त हुने । फेरी म आफैं परिबन्धमा परेको थिए । कस्तो अफ्ठेरो दिन । उफ् जिन्दगीले पनि कता डोर्याउने । कम्तिमा सम्पर्कमै भएको भए पनि सबै कुरा लेख्नु हुन्थ्यो । सायद मसँग आएको पुरुषलाई चिनाउदा उसलाई मैले धोका दिएको ठानेर पो अलग भएको हो कि ! फेरी उसको ठाउँमा म भएको भए पनि त त्यस्तै हुन्थ्यो होला ।
रोमानियको राजधानी बुचारेष्टमा मेरो जिन्दगी राम्रै चल्दैथ्यो । अनि मैलै दुःख सुखको साथि पनि भेटाएको थिए फेसबुकमा । ऊसँगको घण्टौ गफले सामिप्यता मिलेको थियो । मेरो त्यही स्थित सुपरमार्केटमा जब थियो । मैले चिनेको खासै नेपालीहरु पनि त्यहाँ थिएनन् । झण्डै एक वर्ष अघि म आफ्नो काममा जाने सिलसिलामा इस्क्यालेटर (भर्याङ) मा चिप्लिएर नराम्ररी लड्न पुगेछु । मेरो टाउको भुईमा नराम्ररी ठोकिन पुगेछ । होस आउँदा म अस्पतालमा । आँखा खुल्दा अस्पतालको वार्डमा पाँउछु । ठीक अगाडिको चेयरमा एक अपरिचित पुरुष बसिरहेका हुन्छन् । म छक्क पर्छु ।
जिउ उठाउन खोज्दै, “हैन, यो कहाँ हो ? म कहाँ छु ?” आश्चर्य मिश्रित भावमा म सोध्छु । ‘‘हजुर अहिले अस्पतालमा हुनुहुन्छ । सुपरमार्केटमा हजुर एक्कासी इस्क्यालेटरमा लड्नु भयो । टाउको भुईमा बजारियो । म नजिकै थिए । तपाई भए ठाउँमा कुदेर गए । तपाईको होस् थिएन । घाँटीबाट लत्रिरहेको आइडी कार्डमा नेपाली नाम देखे । हत्त त पत्त अस्पताल लिएर आए । आज दुई दिन पछि बल्ल होस् आयो । थ्याङ्क गड ।” उसले बेलिविस्तार लायो । एकाएक त्यो घटना मेरो दिमागमा घुम्न थाल्यो । अहो, कस्तो अन्जान ठाउँमा पनि भगवानले पठाइदिएको मान्छे जस्तो लाग्यो । “धन्यवाद” मैले आभारपूर्ण रुपमा उसलाई भने । अनि उठ्न खोजेको जिउ नै लल्याकलुलुक भएर आयो । यो देखेर उसले भन्यो–“के गर्न आट्नु भएको ? हजुरको टाउकोमा चोट लागेको छ । फेरी डाक्टरले तत्कार हिड्न हुँदैन भनेको छ । बस्नुस । बस्नुस ।”
मेलै टाउकोमा हातले छामे । वरिपरी ब्यान्डेज लगाएको रहेछ । मलाई एकदम कमजोर फिल भै’रहेको थियो । उसले हत्त न पत्त आफ्नो ब्यागबाट अनारको जुस निकाल्यो र त्यसमा पाइप राखि मलाई दिदै भन्यो–“यो पिउनुस् ।” मैले उसले दिएको जुस पिए । जुस नशा–नशामा प्रसार भए जस्तो लाग्यो । सायद, धेरै दिनको भोकले अथवा मुखबाट केही खाना नगएकोले नि हुनसक्छ । एकाएक मलाई मेरो पर्स, मोबाइल, मेरो परिवार अनि मसँग घण्टौ फेसबुकमा गफ गर्ने उही साथिको याद आयो । “मेरो मोबाइल ।”– मात्र मोबाइल भनेर म अलिक जोडले भन्न पुगेछु । “मैले हजुरको सबै सामानहरु सुरक्षित राखिदिएको छु ।” उसले थप्यो “हजुर अचेत भई बेडमा सुतिराख्दा पनि हजुरकोे म्यासेज आइरहेको थियो । शुरुमा त मैले वास्ता गरिन । स्वीच अफ गरिदिए । अनि एक मनले लाग्यो । यो सबै कुरा हजुरको कोही न कोही आफन्त त म्यासेन्जरमा भेटाउछु र यो घटनाको बारेमा भन्दिउ जस्तो लाग्यो । फेरी डाक्टरले पनि होस् आउँछ भनेकोले किन दुःख दिनु जस्तो लाग्यो ।”
नम्र स्वरमा उसले बेलिविस्तार लायो । ऊ भने मेरो होस आउने प्रतिक्षामा बसिरहेको रहेछ । संसारमा यस्तो मान्छे पनि भेटिदा रहेछन् । मसँग त ऊ प्रति आभारको कुनै शब्द नै थिएन । आँखाबाट आँशु खस्न थाल्यो । त्यो आँशु समर्पणको आँशु थियो । ऊ प्रतिको आभारको आँशु थियो । टिस्यू पेपरले आँशु पुछ्दै ऊ भन्दै गयो–“भोली पल्ट मोबाइल फेरी अन गरे । उही मान्छेले म्यासेज एकपछि अर्को गर्दै आउन थाल्यो । सायद स्वीच अफ गरेकोले पेण्डिङ भएका सबै म्यासेज आएर होला । मैले सबै हेरे । अनि त्यसभन्दा अगाडिको पनि हेरे ।” मलाई अलिक असहज महसुस भयो । उसले त सबै म्यासेज हेरेछ । अलिक अफ्ठ्यारो महसुस गरे । म भन्दा अफ्ठ्यारो महसुस उसले गरिरहेको थियो ।
“मैले हजुरकै जस्तो गरी म्यासेज रिप्लाई गरिदिए ।”
मैले मोबाइल मागेर म्यासेज बक्स चेक गर्न थाले । कति धेरै म्यासेज पठाएको रहेछ । उसमा बढी नै छटपटि देखिन्थ्यो ।
“तिमी कहाँ छौं ?”
“किन बोल्दिनौ ?”
“म्यासेज रिप्लाई गर प्लिज !”
यस्तै–यस्तै धेरै म्यासेज उसले पठाएको रहेछ । मेरो अगाडि बसेको अपरिचित मान्छेले सहज उत्तर दिएछ–“म सन्चै छुु । दुई दिन नबोल्दा कस्तो छट्पटि हुन्छ भनेर तिमिलाई सताउन खोजेको मात्र । मलाई माफ गर ।”
“हतेरी तिमि पनि ! अबदेखि भुलेर पनि यस्तो सरप्राइज नदिनु ।”
“हुन्छ बाबा हुन्छ । बरु भन तिमिलाई कस्तो छ ?” मेरो तर्फबाट उसले लेखेछ ।
“तिमिले मेरो प्राण झण्डै लग्यौं । यस्तो पनि हुन्छ ?
–“गल्ति भयो नि त । खासमा म मेरो प्रोजेक्टमा विजी भएर मोबाइल नचलाएको ।”
“अनि यो सब भनेको भए हुन्नथ्यो ।”
“कति माया गर्दाे रहेछौं भनेर चेक गर्नलाई । थाहा पाउनु परेन ।”
“पख न तिमीलाई”
–“ल ल पखि राख्ने हो । यो जीवनभर ………”
यस्तै–यस्तै रिप्लाई गरेको रहेछ । मनमनै हाँस उठ्यो । उसलाई हेरे । ऊ असहजतामा म तिर हेर्न सकिरहेको थिएन । म अचेत भई ढल्दा उसले चिनेको मान्छे जत्तिकै मलाई साथ दिइरहेको थियो । “मैले गल्ति त केही लेखिन नि म्याम ?” विनम्र भावमा उसले प्रश्न ग¥यो ?
–“अँह छैन तर मैले आजसम्म आइ.लभ.यू. लेखेको थिएन । त्यो पनि पो लेखिदिनु भएछ ।” मलिन स्वरमा मैले भने ।
ऊ हल्का मुस्कुरायो ।
“डाक्टरले केही ठोस खानेकुरा खानु भन्नु भएको छ यो लिनु ।” भन्दै उसले टिफिन क्यारीबाट एक बटुको गिलो भात मलाई थमाइदियो ।
यस्तै अपरिचित शहरमा कैले देख्दै नदेखेको मानिस पनि यति सहयोगी हुँदो रहेछ । मनमनै सोचे । झट्ट हेर्दा २९/३० वर्षको देखिने उक्त अपरिचित व्यक्तिलाई मैलै कृतज्ञताको जस्तो शब्द प्रयोग गरेपनि त्यो कमै हुन्थ्यो होला सायद ।
“गिलो भात कहाँबाट बनाएर ल्याउनु भयो ?” –“यही अलिक पर मेरो रुम छ । म आफैं खाना पकाएर खान्छु । आमाले म बिरामी हुँदा पनि यस्तै खाना दिनु हुन्थ्यो । त्यही भएर ।”
चम्चाले विस्तारै खाना मुखमा लाँउदै भन्न थाले, “किन यति दुःख गर्नु भएको मेरो लागि?”
–“यो विरानो शहरमा तपाईको को नै छ र ? यो मेरो कर्तव्य हो ।” ऊ जोड्दै गयो, “अनि फेरी एउटा नेपालीले अर्को नेपालीलाई यस्तो अवस्थामा पनि सहयोग नगरेर कहिले गर्ने त ?”
उसको बोली अनि व्यवहारले एउटा परिपक्व पुरुषको झझल्को दिन्थ्यो । एउटा समझदार र सहयोगी भावना उसको बोलि पिच्छे झल्क्न्थ्यो । “अब तपाईलाई राम्रो हुँदै जान्छ । डाक्टरले भोलि नभए पर्सि डिस्चार्ज दिन्छ । म भरे आउँछु । सारो–गारो परे मेरो नम्बरमा फोन गर्नु ।” यति भन्दै फोन नम्बर भएको उसको भिजिटिङ कार्ड दिएर गयो ।
“धन्यवाद !” भन्दै मैले उसको भिजिटिङ कार्ड समाए । नाम देभराज कटुवाल । कम्पनी मेगा मल । पद सेक्युरिटी अफिसर । ऊ त मैले नै काम गर्ने ठाउँको अफिसर रहेछ । तर, मैले पहिलो पटक अहिले नै देखेको । उमेर ठ्याक्कै तीस वर्ष पुगेको । उसको कार्डको अन्तिममा फेसबुक लिङ्क पनि राखेको रहेछ । अफ्ठ्यारो घडिमा मलाई सहयोग गर्ने उक्त अपरिचित व्यक्तिको बारेमा बुझ्ने हुटहुटी बढी रह्यो । हत्त न पत्त मैलै उसलाई फेसबुकमा सर्च गरे ।
उही नामको धेरै व्यक्ति भएपनि उसको फेसबुक आइडी सर्चको माथिल्लो भागमा बसेको रहेछ । विलम्व नगरी मैले उसको फेसबुक प्रोफाइल खोले । गहुँगोरो वर्ण, नाक छेउ कोठी, दुई फक्लेटा परेको चिउडो र हल्का दाह्री भएकोे स्वयम्भूमा खिचेको फोटो उसले प्रोफाइल पिक्चर राखेको रहेछ । फोटो र अहिलेको मान्छे दुरुस्तै । कभर फोटोमा आफुसहित दुई जना महिला अनि वृद्ध बुबा आमाको फोटो देखिन्थ्यो । लाग्थ्यो यो उसको नितान्त आफ्नो परिवारको फोटो हो र फोटोमा भएका मानिसहरु उसका आमाबुबा र दिदीहरु हुन् ।
उसको प्रोफाइललाई स्क्रोल गर्दै जाँदा ऊ बारे धेरै कुरा जान्ने अवसर मिल्यो । उसको घर दमक गौरादह रहेछ । दुई दिदी पछिको एक्लो भाइ रहेछ । आमाबुबा सँगै दिदी र एउटा भान्जो बस्दा रहेछन् । उसको घर, घरछेउको बगैँचा अनि खेतीबारी हेर्दा ऊ सम्पन्न जस्तो देखिन्थ्यो । जति–जति उसको प्रोफाइल हेर्दै गए त्यति त्यति ऊ परिचित भएको भान हुन्थ्यो । प्रोफाइल हेर्नु अघिसम्म मेरो मनमा एक खाले आधिहुरी चलेको थियो । तर, जब उसको बारेमा थोर बहुत बुझ्ने अवसर पाए एकाएक आँधिहुरी रोकिएपछि सफा भएको मौसम जस्तो भयो मेरो मन ।
दिमागमा धेरै प्रश्नहरु रन्थनिन थाले । त्यस्तै सम्पन्न व्यक्ति आखिर किन वैदेशिक रोजगारमा आयो ? आफ्नो वृद्ध बाबु, आमा छोड्ने आखिर उसलाई के बाध्यता थियो ? किन ऊ अझै सिङ्गल छ ? यति भद्र, सहयोगी, र शालिन मान्छेको जीवनमा कहिले कोही किन आएनन् ?
यी प्रश्नहरुको उत्तर उसको फेसबुक प्रोफाइलले पक्कै दिदैनथ्यो । फेरी मैले किन सोध्ने ? अँह म सोधेरै छाड्छु ऊ आए पछि । हैन–हैन यसो गर्नु हुन्न । मनमा द्वन्द्व चली थाल्यो ।
त्यतिकैमा मेरो मोबाइमा म्यासेजको रिङ बज्यो ।
“हेलो डियर सन्चै छौ ? उही मसँग सदाबहार च्याट गरिराख्ने साथि ।
–“ठीक छु ।” मैले जवाफ दिए ।
“कहाँ छौ अहिले ? त्यहाँ त साँझ हुन लाग्यो होला ? अफिसमा कि घरमा ?”
मलाई गाह्रो भयो जवाफ दिन । कसरी भन्न सक्छु म अहिले अस्पतालको बेडमा छु भनेर । र, मसँग एक अपरिचित पुरुष छन् भनेर ।
मैले सहज जवाफ दिए–“म अहिले घरमै आराम गरिरहेको छु ।”
(कथाको पात्र तथा स्थान काल्पनिक हुन्। कसैको वास्तविक जीवनमा मेल खाएमा संयोग मात्र हुनेछ ।)
कथाः साइबर प्रेम (भाग–१)
कथाः साइबर प्रेम (भाग–२)
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, जेठ २१, २०७८ समय: १९:२२:३४